နှာခေါင်းစည်းအတုတွေ သုံးနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု? - Zet Star
နှာခေါင်းစည်းအတုတွေ သုံးနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု?
ကျနော် N95 Mask အတုအကြောင်း ရေးခဲ့တာ တစ်ပတ်ပြည့်တဲ့နေ့ ခုချိန်ထိ ဝန်ကြီးဌာနဘက်က စာလေးတစ်စောင်တောင် အောက် မရောက်လာဘူး တကယ်ဆိုရင် N95 အတုတွေ ဖောခြင်းသောခြင်း ဖြစ်နေတာလည်း သိနေပြီ ရှေ့တန်းတွေထိ…ရောက်နေတာလည်း သိနေပြီ..
အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်လူတွေ မထိအောင်.. ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့… N95 အတုတွေကို ဂရုစိုက် ဖို့ရယ်… အတုအစစ် ခွဲတဲ့….အကြမ်းဖျင်း.. အချက်အလက်တွေရယ်.. မြေပြင်က ရှေ့တန်းက…ကိုယ့်လူတွေဆီကို ထုတ်ပြန်ပေးသင့်ပြီ ဒါမှ သူတို့ အတုအစစ် ခွဲခြားပြီး သတိထား သုံးနိုင်မှာ…
အပြင်ကို ထုတ်ပြန်ဖို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော် အပြင်က လူ ဘယ်လို အတုရောင်းရောင်း ကိုယ့်လူတွေ လက်ထဲ…အဲ့တာမျိုး မရောက်အောင်ရယ် ကိုယ့်လူတွေ လက်ထဲက ပစ္စည်းတွေကို အတုအစစ်ခွဲပြီး သုံးနိုင်အောင်ရယ်.. ဆရာကြီးတို့ အဲ့လောက်တော့ နည်းနည်းလေး လုပ်ပေးသင့်ပြီ ထင်တာပါပဲ ခမျ..
ကျနော်တို့ အပြင်က လူတွေပြောတာနဲ့ ဆရာကြီးတို့ တရားဝင် ထုတ်ပြန်တာနဲ့ တစ်ခြားစီပါ…. ဆရာကြီးတို့ က သတိထားဖို့ စာလေး ထုတ်တာနဲ့ အများကြီး အကျိုးသက်ရောက် မှုရှိပါတယ် ဟို မီဒီယာ က ဒီမီဒီယာက…တိုက်တွန်းဘာညာ… လာမပြ ကြပါနဲ့. အဲ့ လူတွေက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့… သတင်းထုတ်ပြန်ရေးတွေ မဟုတ်ဘူး…
အပြင်က ပြန့်နေတဲ့ အတုတွေကို.. ဂရုမစိုက်လို့ ရတယ်။ ကိုယ့်လူတွေကိုတော့ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုတယ်. ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက ချက်ခြင်းထပွားလို့ မရဘူးဗျ. ဘာတွေ ခက်နေတာလဲ ခမျ။ အတုတွေ လှိမ့်ဝင်လာတော့မယ်ဗျ…. သူတို့ကို မတားနိုင်ရင်တောင်.. ကိုယ့်လူတွေ လုံခြုံအောင်တော့… အသိပညာပေးတာလေး ဘာလေး… လုပ်ကြပါဗျ အချိန်နဲ့ အမျှ… အရေးကြီး လို့ပါ ဗျ
← ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး သန်း ၂၇၀ ကျော်ကို အင်ဒိုနီးရှား ဝယ်ယူ (တနိုင်ငံလုံး လူဦးရေထက် ပိုပြီး ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်)
Project K အဖွဲ့ ကန်တော့ပြီး တောင်းပန်ပြီ →